UV uye tembiricha yekukwegura bvunzo - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
UV uye tembiricha kuchembera kuyedza kumwe kunodai mamiriro ekunze kukwegura bvunzo kuongorora mhando yezvinhu kana zvigadzirwa kana zvikasangana zvinotarisirwa mashandiro uye hupenyu. Muedzo uyu unofanidza mamiriro ekunze akasiyana, seakanyanya mwando, yakakwira UV-radiation uye yakanyanya tembiricha.
Isu tinopfuurira kuyedza pane angangoita ese epamusoro tambo zvigadzirwa
-Insulated kuboora zvinobatanidza
-Fiber optic tambo
-Fiber optic splice kuvharwa
-FTTH inodonha tambo kambo
Kamuri yekuyedza yakagadziridzwa otomatiki, iyo inogona kudzivirira kukanganisa kwevanhu kuti ive nechokwadi chechokwadi uye kunyatso kuyedza. Mamiriro ekunze ekukwegura bvunzo maitiro inosanganisira kuisa zvigadzirwa mukamuri ine presetting mwando, UV mwaranzi, tembiricha.
Bvunzo rakagadziridzwa negumi nemaviri ezve kutenderera kwekukwira uye kudonha zvataurwa nzira. Kutenderera kwega kwega kunosanganisira mamwe maawa emamiriro ekunze ane hukasha. Zvese zvinodzorwa ne radiometer, thermometer nezvimwe. Iyo radiation, tembiricha, hunyoro reshiyo uye nguva zvine akasiyana maitiro hwaro pamiyero EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yemagetsi ekuparadzira zvishongedzo, uye IEC 61284 yepamusoro fiber optic tambo, uye zvishongedzo.